Reuzel - Degrease/Travel Kit | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Reuzel - Degrease/Travel Kit
Default Title - MMK 55,000 MMK
အမျိုးအစား: Oil-Based ခေါင်းလိမ်းဆီများကို ဆေးကြောရန်နှင့် ခရီးသွားအိပ်ဆောင် သယ်ယူသွားနိုင်ရန် Hair Wash Kit
--Degrease | Cleanse | Condition | Travel-Friendly--
Oil-Based ခေါင်းလိမ်းဆီများက အသုံးပြုရကောင်းသလောက် လိုအပ်တဲ့အချိန် ခေါင်းလျှော်ရလွယ်ရင်လည်းကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိသူများရှိကြပါလားဗျ???
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ Reuzel - Degrease/Travel Kit ဒီမှာရှိပါတယ်။
Reuzel - Degrease/Travel Kit မှာ Reuzel - Daily Conditioner, Reuzel - Daily Shampoo, Reuzel - Scrub Shampoo Travel Size (100ml) သုံးမျိုးပါဝင်ပြီး၊ ခေါင်းပြန်လျှော်ရခက်တဲ့ Oil-Based Pomade အသုံးပြုသူတွေအတွက် အောက်ပါ Degrease လုပ်နည်းအတိုင်း ပြောင်စင်အောင်ခေါင်းပြန်လျှော်ရာမှာအသုံးပြုနိုင်သလို၊ ခရီးမကြာခဏထွက်ရသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Gym သွား ဘာသွား အပြင်မှာ ရေချိုးခေါင်းလျှော်တတ်သူတို့အတွက်လည်း အလွယ်တကူဆောင်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
Reuzel - Degrease/Travel Kit မှာပါရှိသော Wash Products များ အားလုံးကို Reuzel ရဲ့ Signature Key Ingredients ဖြစ်တဲ့ T-4 Tonic Blend တွင်ပါဝင်သော သဘာဝ Witch Hazel Extract, Nettle Leaf Extract, Rosemary Extract, Horsetail Root Extract အစရှိသည့် သဘာဝအဆီဓာတ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြပါတယ်။
Reuzel - Daily Conditioner အကြောင်း: https://mmgents.com/products/reuzel-daily-conditioner
Reuzel - Daily Shampoo အကြောင်း: https://mmgents.com/products/reuzel-daily-shampoo
Reuzel - Scrub Shampoo အကြောင်း: https://mmgents.com/products/reuzel-scrub-shampoo
Oil-Based Hair Products are always very good at styling, holding your hair throughout the day and keeping your hair as well as scalp moisturized. As it lasts longer in keeping your hair styled, it can also beapain to wash it off completely.
Ever wonder how to get out Oil-Based Products from your hair completely??
Reuzel - Degrease/Travel Kit includes Travel Size (100ml) Reuzel - Daily Conditioner, Reuzel - Daily Shampoo and Reuzel - Scrub Shampoo which will all work together to degrease your hair, cleanse it and to bring your hair and scalp back to the way it was.
Not only this combo kit is useful asadegreaser, it is famous among frequent travelers, gym-goers or for the Gentlemen whose lifestyle requires to shower outside of your home. The three travel-sized Reuzel Wash Products can easily be thrown into your gym bag or your luggage, enabling you to freshen yourself up whenever the time comes.
All Reuzel Wash Products are formulated with the Signature T4 tonic blend of natural witch hazel, nettle leaf, rosemary and horsetail root extracts which will leave you withastronger, shinier head of hair.